U-Chien Chung Wei kunye nemeko yakhe yasemanzini ekhumbuza iiklasikhi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-Watercolor kwiiNdawo zeChien Chung Wei
I-Watercolor inempawu ezintle zokuyazi kakuhle kwaye iyayazi indlela yokusebenzisa kwinqanaba elifanelekileyo kwi-gouache Unokwenza ngazo zonke iintlobo zegradients kunye noburhabaxa obunika imeko ekhethekileyo, enje ngemizobo kaChien Chung Wei.
UChung Wei masters gouache ngendlela ebalaseleyo kwaye ibonisa kwimizobo yakhe nganye. Ipeyinti esemgangathweni esemgangathweni esikhokelela kwezo zitrato zaseTaiwan kunye needolophu. Umzobi ophethe i-watercolor inkanuko yakhe enkulu kunye ne-fortune enkulu ngenxa yobunewunewu bobugcisa bakhe kunye nonyango olumnandi kwipleyiti nganye onokuyibona kuye.
I-watercolor kaChien Chung-Wei iqokelela imimoya kwaye ubume bootitshala basentshona ye-watercolor kwiinkulungwane ezimbini ezidlulileyo, njengoko ziqokelelwe kwi-Bio yakhe kwiwebhusayithi yakhe. Xa wayeneminyaka engama-32 ubudala, imisebenzi yakhe yayiyeyona nto ibuthathaka kunye neklasikhi, ekhumbuza u-William Henry Hunt kunye no-Myles Birket Foster.
Yenza umsebenzi ngamnye ubuhle obungenambaliso nge izigcawu zemihla ngemihla ukuze sikwazi ukuphuma kwisixeko ngasinye. Umzobi waseTaiwan enezipho ezikhethekileyo zokwenza ulungiso lomhlaba kunye nokusisa phambi kwemizobo yakhe kuloo ndawo inokuphantse yaphefumla ukuba ubani ujolisa kwiinkcukacha zayo.
Iiveki ezimbalwa apho sithatha umsebenzi wobugcisa wabapeyinti abohlukeneyo ezilandela zakudala kwi ikeyiki yerosemary, kwi oyile Tordesillas okanye chukumisa kumfazi kaMaokun.
Unayo Facebook nguChung Wei kunye eyakho iwebhusayithi ukonwaba ngemisebenzi yobugcisa ye Umgangatho okhethekileyo wamanzi walo mzobi waseTaiwan. UChuing Wei usisa kwiklasikhi entle kwaye intle kakhulu apho iindawo zomhlaba zibaluleke kakhulu kwaye zisibuyisele ubuhle bemihla ngemihla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » I-Watercolor kwiiNdawo zeChien Chung Wei
Amanani abantu angaqhelekanga kaKorehiko Hino
"Siphefumla into esiyithengayo", iphulo elitsha leWWF elinemifanekiso emithathu egxile kwioyile yesundu